मार्च 8, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, पेप्टिक अल्सर
पेप्टिक अल्सर अधिकांश नेपालीलाई देखिने रोग हो । यस्तो प्रकारको रोग प्राय: खानपिनको लापरबाहीले हुने गरेको पाइन्छ । खाली पेट बस्ने, समयमा खाना नखाने, मसलायुक्त खानाको प्रयोग बढी गर्नेहरुमा बढी हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो पेटमा जब एसिड बढी बन्न थाल्छ यस्ले आन्द्रामा घाउ बनाउन थाल्दछ । अल्सर भइसकेपछि पेट पोल्ने दुख्ने जस्ता समस्या देखिन थाल्दछ । पेप्टिक अल्सर र गैस्ट्रिक अल्सर अमाशयको सानो आन्द्रामा बढी प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्तो समस्या त्यति बेला सुरु हुन्छ जुनबेला हामीले खाने खाना पचाउने एसिड बढी बन्न थाल्दछ र यसले बढी असर देखाउछ । यो एक प्रकारको घाउ हो कालान्तरमा देखिने पेटको क्यान्सरको लक्षण हो ।
पेप्टिक अल्सर ड्यूडिनलमा हुन्छ । यो दुइप्रकारको हुन्छ । पहिले गैस्ट्रिक अल्सर भइसके पछि मात्र ड्यूडिनल अल्सर सुरु हुन्छ । अल्सर भइसकेपछि देखिने लक्षणमा पेट दुख्ने,पेट पोल्ने,उल्टि हुने,दिशामा रगत देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई परफारेशन पनि भन्दछन् । गलत खानाको कारणले यो रोगले तिब्र गति लिन सक्छ । यो हुनुमा खानपिन दोषी ठहराइएको छ । पेटमा खानाको लापरबाही ले गर्दा एसिड बढी पैदा हुनु नै अल्सरको प्रमुख कारण हो । नेपालीहरू पेटलाई हेर्दैनन् खाना पाय जस्तो सुकै खाना किन नहोस् खान्छन् र रोगको दलदलमा फस्न थाल्दछन् ।
ग्याष्ट्रिकको प्राकृतिक उपचार
लुकोरिया र यसको घरेलु उपचार
अल्सर हुनुको अर्को प्रमुख कारण हो जथाभावी दुखाई कम गर्ने खालको औषधिको सेवन बढी गर्नु । खानापछि अर्को कारण मानसिक चिन्तालाई पनि प्रधान कारण मानिएको छ । खानपिनको कारणले मात्र अल्सर नभई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टिरिया पनि एउटा कारण हो । धुम्रपान, जाडरक्सि पनि यसको कारण मानिएको छ । गैस्ट्रिक अल्सरमा खाना खाना साथ पेट दुख्ने हुन्छ भने ड्यूडिनल अल्सरमा भने खाली पेट भएमा पेट दुख्न थाल्दछ । ड्यूडिनल अल्सरमा खाना खाएपछि पेट दुख्न कम हुन्छ ।
यदि हामीले यसको उपचार समएमा गर्न सकेनौं भने अल्सर ,क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग लाग्न सक्छ । यस्तो रोगमा कहिलेकाहीं घेरेलू औषधिले पनि यो रोग निको बनाउन सकिन्छ । तर कुनै पनि उपचार गर्नु पुर्ब डाक्टरको परामर्श आवश्यक हुन सक्छ । यस्तो रोग लाग्नु पुर्ब खानपिनमा बढी ध्यान दिन आवस्यक छ । मसलायुक्त खाना नखाने । अल्सर भइसकेको रोगीले सकेसम्म चिया, कफि, चिसो पेय पदार्थ, जंक फूड नखानु सवै भन्दा उत्तम मानिएको छ । समयमा डाक्टरको परामर्शमा एसिड हटाउने खालको औषधि सेवन गरेमा चाँडो निको हुन सक्छ ।
दुखाई कम गर्ने खालका औषधिले प्राय ग्यास बढाउने भएकाले डाक्टरको परामर्श लिएर मात्र खाने बानी बसाल्न सके राम्रो हुनेछ । सामान्य औषधि खाएर पनि रोग निको नभएमा कहिलेकाही ब्लड चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अनुभवी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा उपचार गराउन पर्दछ ।
१. अभिपत्तिकर चूर्ण १ चमच दिनमा २ पटक खाना अघि खाने ।
२. अल्सरका रोगीले गाईको घीउ खानाले राम्रो फाइदा गर्दछ ।
३. अल्सरका रोगीले बदाम खादा राम्रो फाइदा गर्दछ । २,३ वटा बदाम नित्य चपाएर पानी पिउनु राम्रो फाइदा गर्दछ ।
४. आधा गिलास गाइको दुधमा आधा गिलास पानी मिलाएर पिउनाले पनि राम्रो फाइदा गर्दछ ।
५. पत्ता गोभी र गाजर ल्याउनुहोस समभाग मिलाएर जुस बनाएर खानुहोस् यसले पनि अल्सरलाई राम्रो फाइदा गर्दछ ।
नोट : कुनै पनि उपचार गर्नुपुर्ब डाक्टरको परामर्श लिएर उपचार गर्नु राम्रो हो ।
← को हुन् यूवा वैज्ञानिक भीम सुनार ?
पानी र यसको महत्व →
अप्रील 27, 2019 अप्रील 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
सेप्टेम्बर 20, 2018 सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3
One thought on “पेप्टिक अल्सर र यसको घरेलु उपचार”
Pingback:फैटी लिभर र यसको उपचार